Ny fanamafisana ny ririnina amin'ny ririnina dia ny nofinofisin'ny vehivavy iray, na inona na inona taonany sy ny endrik'izy ireo . Raha ny marina, ny tena antsasaky ny olombelona maha-olombelona dia mendrika ny tsara indrindra. Noho izany, amin'ny ankamaroan'ny modely sy ny karazana, mavesatra ny hoditra fotsifotsy manokana ho an'ny vehivavy matavy. Ny vokatra toy izany dia tsy tokony ho ny kalitao avo sy ny hafanana ihany, fa koa mahasoa ny manantona ny silhouette vavy sy ny satany eo amin'ny fiarahamonina.
Models amin'ny akanjo hoditra ho an'ny vehivavy matavy
Ny safidy tsara indrindra ho an'ny feno, araka ny stylists, dia akanjo mimanda. Saingy tsara kokoa ny mandà ny Mouton amin'ny ankapobeny, na dia eo aza ny fahafahan'ity safidy ity kokoa ara-bola.
Raha miresaka momba ny akanjo marevaka matevina ho an'ny feno, dia zava-dehibe ny mahatsiaro fitsipika iray - tsy misy hoodies! Voalohany indrindra, ny vokatra tahaka izany dia tsy misy elanelana, ary faharoa, hampiana fanampiny fotsiny izany. Ny vehivavy manana zezika tery sy hipaka be dia be dia be ny akanjo lava lava lava vita amin'ny volon-damosina volomparasy sy ny kavina izay mampitaha amin'ny fomba mampitaha ny haavon'ny tarehimarika.
Ankoatra izany, tokony hosorohana ny akanjo mivalomainty misy tasy sy tandroka kely. Ny tsotra indrindra dia ny fomba tsotra. Azo atao ny modely modely, ary koa ny vokatra mivantana miaraka amin'ny ambany. Ohatra, ny safidy farany hifantoka amin'ny vehivavy raha tsy voafaritra mazava. Ny akanjo tena tsara dia karakul ny akanjo volom-borona misy kapa miloko volom-boasary ary misy tsiranoka.
Saingy ny vehivavy manana fehin-kiraro mahafinaritra, volo matevina ary vovobony ety dia tokony handinika tsara ireo modely fohy amin'ny silhouette maimaim-poana. Ny akanjo volon'ondry toy izany amin'ny endrika feno dia ny safidy tsara indrindra ho an'ny akanjo isanandro, fa koa ho an'ny famotsorana. Amin'ny fotoan'ny hatsiaka dia afaka manangona modely lavarangana lavalava ianao.
Raha ny loko misy loko, dia aleo misafidy loko maivana izay miloko marevaka, ary ny modely dia tokony hatao amin'ny volom-borona amin'ny kitapo fohy. Saingy tsy midika izany fa voarara ny vokatry ny loko hafa. Ny zavatra rehetra dia miankina amin'ny fahafenoan'ny vehivavy.
Fanamboarana fanadiovana ho an'ny vehivavy matavy
Ny akanjom-behivavy - amin'ny inona no tokony hanaovana an'ity loko ity?
Vehivavy mafana ny hafanana
Blaogera - mahasoa
Ny aretina simika amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe - lisitra sy fomba hiadiana amin'izy ireo
Kreatinine amin'ny urine
Hairstyle amin'ny fikarakarana volo lava
Make-up ho an'ny sary amin'ny ririnina
Ahoana no hijerena tsara tarehy sy tsara tarehy?
Ny fomba hanamboarana ny atin'ny ronono dia malefaka sy malefaka - ny sakafo tsara indrindra isan'andro
Tabilao ny fametavetana ankizy hatramin'ny 1 taona
Inona no atao hoe antitra, ary inona ireo fitsipika efatra momba ny fampiharana tsy fantatrao?
Ahoana ny fisafidianana loko miloko?
Ahoana no hisafidianana tongolo lay mba hambolena ny ririnina?
Akirina ho an'ny fantsika
Frank Sotsanni, ilay loham-pamokarana maharitra ao Vogue Italia, dia maty
Manicure lakolosy jaky